HGH Thailand pharmacy manome maimaim-poana Genotropin ary ny vokatra HGH hafa ho an'ny faritra rehetra ao Thailand
Fitaterana Courier any Bangkok
Fitaterana Courier ao Bangkok - Ny pharmacy dia mandray baiko avy amin'ny 9: 00 am - 8: 00 pm, ny baiko voaray alohan'ny 3: 00 pm dia halefa mitovy andro.
Ny baiko voaray aorian'ny 3: amin'ny hariva 00 amin'ny hariva dia hovana ny ny ampitson'iny, ny famindrana rehetra avy amin'ny 9: 00 ao amin'ny 3: 00 pm.
Fandefasana an-tariby sy vola amin'ny vidiny Bangkok. Mandefa fitomboana isika hormon avy amin'ny Air Cargo Chiang Mai, Phuket.
Express mail to Pattaya, Hua Hin, Udon Thani, Koh Samui, Koh Chang, Suratkhani sy ireo tanàna hafa sy faritany rehetra ao Thailand.
Ahoana no fomba hametrahako baiko?
Taorian'ny nanatanterahanao ny baiko tao amin'ny tranokalanay tamin'ny alàlan'ny harona na amin'ny mpanolo-tsaina ao amin'ny tranonkala, nanamafy ny adiresy sy ny fe-potoan'ny didy, manomboka mametraka ny courrier ho fanomanana ny fampidirana hormonina mitombo.
"Azafady mba miangavy anao ny fifandraisana amin'ny contact anao mba hifandray aminao, E-mail, telefaona
laharana na Whatsapp, andalana, Viber (raha tsy misy ny isa Thai) ".
Sakafo sy fitaovana
Ny Genotropin dia hapetraka amin'ny toeram-pisotroana medikaly miaraka amin'ny ranomandry mitazona ny hafanana tsara indrindra amin'ny fitehirizana ny hormone 2-8 ambaratonga.
Ny kity dia ahitana (maimaim-poana):
BD Ultra Fine Needles (kitapo 40) ho an'ny penina
Fitsaboana ara-pahasalamana ara-pahasalamana (Tempoly 2-8)
Aorian'ny fikarakarana ny baiko, hifantoka amin'ny 1-2 ora alohan'ny fandefasana ny mailaka (hanamarina ny baikonao)
Ny mpitory dia hametraka ny baiko any an-tranonao, hotely, trano na toerana fivoriana (oh: seranana sy hafa)
Aorian'ny fandraisana ny baiko, dia tsy maintsy mandoa vola amin'ny vola ianao (manaiky baht Thai ihany).
Ny famindrana Genotropin dia maka andro 1-2 mankany Phuket sy Chiang Mai.
Hatramin'izao, dia tsy manolotra ny fifamoivoizana iraisam-pirenena mankany Chiang Mai sy Phuket isika (hanova ny antsipirian'ny mpanolotsaina sy ny famindrana fanampiny safidy).
Alaivo ny hormonina mitombo ao Phuket na Chiang Mai amin'ny alàlan'ny fiantohana ara-barotra Air prépayé
Ahoana ny fametrahana baiko any Phuket sy Chiang mai?
Aorian'ny fametrahana ny baiko amin'ny alàlan'ny harona mpanolo-tsaina amin'ny tranonkala, telefaona na mailaka
"azafady mba manondro ny tena anaranao sy ny anaranao voalohany mba handraisana baiko ary
Halefanao ny antsipirianay momba ny banky ho an'ny fandoavam-bola, ny fanamafisana ny adiresy famindrana, dia hifandray amin'ny telefaona bebe kokoa ianao tsipiriany.
Aorian'ny fandraisana ny fandoavam-bola amin'ny banky banky. Ny iraka avy amin'ny 9: 00 am Ho amin'ny 8: 00 pm dia handefa ny baikonao any amin'ny seranam-piaramanidina any Bangkok amin'ny fitsaboana iray fitahirizana ranomandry, amin'ny alàlan'ny serivisy Thai Airways cargo any Thailand. Manome ny antontan-taratasy ilaina, anarana sy ny anaran'ny mpandray, ary koa ny tanàna sy ny seranam-piaramanidina izay ahafahan'ny mpanjifa mandray ny baiko. Ny baiko rehetra dia nalefan'ny fiaramanidina voalohany.
Ahoana no hahazoanao baiko?
Angataho mora ny filaminana, mila mandeha any amin'ny seranam-piaramanidina ianao, Air Terminal Air, miaraka amin'ny pasipaoro na karatra idiana mba hahazoana ny baiko. Tokony hanolotra ny mpiasa amin'ny mpamatsy entana Air cargo ianao ny tapakila ho an'ny baikoo.
Fandefasana ny genotropine ho an'i Hua Hin, Pattaya ary tanàna sy faritra hafa
ny Thailand (1-3 andro)
Fandefasana any Hua Hin, Pattaya ary tanàna sy faritra hafa ao Thailand dia natao amin'ny alim-bolana amin'ny fampiasana ny tolotra EMS ho fanoherana an'i Thailand. Rehefa nahazo ny baiko avy amin'ny mpanolo-tsaina iray ao amin'ny tranokala na ny Karazan-tsakafo (Anarana sy adiresy ny adiresy) Halefay ny antsipiriany mba handoavana ny kaontinay Thai bank. Rehefa avy ny fandraisana ny fandoavam-bola, ny courrier dia hanatsara ny fitomboan'ny fako hormonina amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny mpanjifa. Fandefasana hafatra avy amin'ny 9: 00 amin'ny 8: 00 amin'ny alàlan'ny EMS avy any Thailand fanompoana (mila andro 1-3 arakaraka ny adiresy famindrana)
Rehefa avy mandefa, dia handefa anao ny laharam-pandehananao ny baiko, ianao dia handray izany amin'ny alàlan'ny adiresinao ny varavarana.
Ahoana no fomba handefa ny kaonty any amin'ny kaonty any Thailand?
Ny famindrana amin'ny banky no fomba azo antoka sy azo antoka indrindra amin'ny fandoavana fitaovam-piasana sy serivisy any Thailandy, noho ny fanaovana famindrana izay ilainao fotsiny Fantaro ny isa misy ny kaonty sy ny banky momba ny fifampiraharahana.
Ny famindrana dia azo atao amin'ny ATM amin'ny alalan'ny famenoana vola amin'ny ATM ary mamaritra ny nomeraon'ny kaonty.
Ny famindrana dia azo atao amin'ny olona amin'ny alalan'ny banky, noho ny fahatsorana,
lazao amin'ny mpanolo-tsaina ao amin'ny banky izay tianao halefa, ary izany dia
Tsy mihoatra ny 15 minitra.
Hey. Nandefa pikantsary aho. Nahazo izany ve ianao?
Suzanentic Novambra 06, 2018
SuzanWhicy Novambra 02, 2018
Eny, azo antoka fa ao amin'ny biraonay any Bangkok
bola amin'ny aterineto amin'ny alàlan'ny carte de crédit tsy misy
Jan Aogositra 03, 2018
Azoko aloa amin'ny carte de crédit 💳?
Michael Jolay 24, 2018